Eyga quruxda badan ee White Shepherd ee isha ku haya - Taranka
Eyga quruxda badan ee White Shepherd ee isha ku haya
Sidoo kale loo yaqaan Markabka Berger Blanc Suisse oo ku qoran af Faransiis , Shepherd White Swiss Shepherd baraf leh waa qurux badan, aad loo raadsado-kadib markii nooc cusub ku cusub.
Digniintaan, eeyaha daacadda ah ee firfircoon waxaa sidoo kale loo yaqaan Weisser Schweizer Schäferhund oo Jarmal ah iyo Pastore Svizzero Bianco oo Talyaani ah.
Raadinta Adhijirka Caddaanka ah ee Swiss si aad u wacdo mid kuu gaar ah, sii wad akhriska si aad u ogaato wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan taranka quruxda badan.
Taariikh: Xagee ka yimaadeen Adhijirka Cadaanka ah ee Swiss?
Muxuu u egyahay eeyga Berger Blanc Suisse?
Caddaajistayaasha Caddaanka ah ee Swiss ma yihiin kuwo gardarro ah ama eeyo qoys oo wanaagsan?
Muujinta Berger Blanc Suisse isla jacaylka ku soo celinta
Waa maxay dhibaatooyinka caafimaad ee guud ee saameeya Adhijirka White Swiss?
Xagee laga iibsan karaa eeyaha yar ee Shepherd White?
Noocyo la mid ah White Shepherd White
Ma inaad heshaa Adhijre Cadaan ah?
Von Stephanitz, oo ah kabtanka Jarmalka, waa ninka lagu tiriyo inuu abuuray kii ugu horreeyay Adhijirka Jarmalka . Wuxuu raadinayey eey leh xoolo dhaqasho iyo karti shaqo oo gaar ah.
Astaamaha White Shepherd White waxay aad ugu egyihiin Adhijirka Jarmalka labadooduna waxay wadaagaan shakhsiyado badan iyo dabeecado jireed.
The White Swiss Shepherd Dog ayaa maanta loo yaqaanaa eey ka yimid Switzerland.
Farac ka mid ah Adhijirrada Jarmal ee midabka cad, Shepherd White Swiss waa nooc si caddaalad ah dhowaan loo aqoonsaday oo aan lagu qaldin Shepherd Caddaanka Jarmalka.
Qiyaastii 1930-meeyadii dadku waxay bilaabeen inay aqoonsadaan Eyga Shepherd Dog-ga ah ee White Swgd Dog wuxuu leeyahay nooc u gaar ah.
In kasta oo eeyahaani soo bandhigeen astaamo la mid ah Adhijirka Jarmalka, ayaga midab-baraf cad iyo dabeecad khafiif ah iyaga gooni uga dhig iyaga oo ah farcankooda.
Iyada oo ay taasi jirto, Adhijirro Jarmal ah oo midab cad looma oggola in laga diiwaan geliyo Jarmalka.
Midabka cad ayaa si kastaba ha noqotee looga jeclaa Mareykanka iyo Kanada halkaasoo eeyahaani ay ku kasbadeen dad soo raaca isla markaana la aasaasay naadi cawdo ah, in kasta oo White Swiss Shepherd uusan weli aqoonsi ka helin Naadiga Kennelka Mareykanka (AKC).
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan farqiga u dhexeeya White Shepherd White iyo Shepherd White German, iska hubi maqaalkan .
Aabaha maanta ee White Shepherd White ayaa la sheegay inuu yahay eey magaciisu yahay Yey kaasoo ku dhashay America 5-ta Maarso 1966.
Mulkiilaha Lobo, oo ah muwaadin u dhashay Switzerland laguna magacaabo Agatha Burch ayaa si ula kac ah u baabiiyey Lobo iyo eey dumar ah oo lagu magacaabo White Lilac si ay u aas aasaan.
Lobo iyo White Lilac ayaa lagu wadaa inay noqdaan labada lamaane ee aasaasey isirka maanta. The White Swiss Shepherd waxaa si ku meel gaadh ah u aqbalay 2002 Xiriirka Caalamiga ah ee Isboortiga (FCI).
Tan waxaa ku xigay aqbalaad buuxda ee taranka FCI ee 2011 iyo aqoonsiga rasmiga ah ee Kooxda Kennel ee Boqortooyada Ingiriiska ee 2017.
Maanta, Adhijirka Caddaanka ah ee Switzerland ayaa ah loo barbaariyay sida wehel iyo sida eeyaha shaqeeya . In kasta oo aan si joogto ah loogu arkin shaqada millatariga iyo booliiska sida Adhijirka kale, haddana waxaa si joogto ah loogu adeegsadaa daaweyn ama eeyo curyaan ah.
Ahaanshaha adhijirka reer Jarmal ee Jarmalka, White Shepherd White wuxuu qaataa muuqaalo badan oo astaamaha qoyska Shepherd, iyadoo dhegaha fiiqan iyo weji dherer leh , laakiin ku yaal qaab yar.
Berger Blanc Suisse wuxuu leeyahay qaab muuqaal ah oo muuqaal ah oo qaabaysan oo leylis leh oo cidhiidhi ah, laakiin qoto dheer, xabadka, miskaha hooseeya, dhabarka duuban iyo madax kacsan.
Marka loo eego heerka sinjiga , eeyahaani waa inay lahaadaan madax adag, qafiif ah, madax-xajmi leh oo si fiican ugu habboon jirka intiisa kale. Madaxooda waa inaysan laheyn dhabar ama dhabano jilib laakiin waxay yeelan doonaan muuska xoog leh, oo dherer ah.
Indhahoodu yicibta u egyihiin ayaa si ula kac ah madaxa loo saaraa midabkooduna waa bunni.
Sida Adhijirka Jarmalka, Adhijirka Caddaanka ah ee Switzerland wuxuu yeelan doonaa dabad duurjoogta ah oo korka u taabanaysa laakiin ka duwan tan madow iyo Shepherd Jarmal madow, noocani wuxuu ku yimaadaa oo keliya midab cad oo aan calaamado lahayn jubbadda
Dharkooda labbiska ah ee cufan waa mid qaro weyn oo faro badan si fiican ugu habboon qabowga . Koodhka hoose waxaa ku daboolan lakab dhexdhexaad ah ama dheer oo sare ah oo yeelan kara waab yar.
Waxaad dhihi kartaa in eeygan eygu u eg yahay yeey qurux badan, oo ka sii boqortooyo yeeyda.
Baaxadda: Dhererka & culeyska The Shepherd White Swiss
Adhijirrada Caddaanka ah ee Swiss waxay leeyihiin miisaan celcelis ahaan ah inta udhaxeysa 77 iyo 85 lbs (35 ilaa 40 kg), oo istaag dherer ah 22 ilaa 26 inji (55 illaa 65 cm). Haweeneyda Berger Blanc Suisse waxay dhererkeedu noqon doonaa 5cm marka loo eego dhiggeeda ragga, culeyskeeduna waa 5 Kg sidoo kale.
Baaxaddooda ballaaran waxay ka dhigeysaa ey ey waardiye fiican leh, gaar ahaan marka la jaanqaadayo jilifkooda dheer. Si kastaba ha noqotee, cabirkooda iyo heerkooda tamar darteed, eeyahaani waa laguguma talin inaad ku noolaato qaab guri waxayna u baahan doonaan boos ballaaran oo ay ku ordi karaan.
U fiirso fiidiyowgan si aad u aragto sida weyn eeyaha yaryar ee 'Shepherd Shepherd' ay ka helaan da'da 2 illaa 6 bilood:
Berger Blanc Suisse waa a eey jilicsan oo haybad badan oo ka dabacsan marka loo eego dhiggooda Jarmalka ee Shepherd. Iyagu sidoo kale ma aha kuwa baxa oo gardarro ah. Halkii, waxay noqon karaan kuwo xishood badan oo xitaa xariif ah .
Sida ilma adeeradooda caqliga leh ee Shepherd, White Shepherds waa tababar fudud oo leh karti sare xagga waxbarashada. Noocan dhalaalaya ee caqliga badan wuxuu ubaahanyahay tababar wuxuuna jecelyahay inuu isticmaalo maskaxdiisa si uu u xaliyo xujooyinka .
Eeyahaani waa kuwo xasaasi ah laakiin sidoo kale aad u malle ah iyo haddii si sax ah loo tababaray waxaa loo dejin karaa inay la shaqeeyaan adeegyada gurmadka ama unugyada booliska. Waxay si gaar ah ugu habboon yihiin jimicsiga goobidda iyo samatabbixinta.
Xitaa maanta, Berger Blanc Suisse waxay u isticmaalaan beeralaydu inay raacaan oo ay ilaaliyaan adhiga ayna raadiyaan xoolo lumay.
Markaad tababbarayso Adhijirka Cad ee Swiss waxaa muhiim ah inaad isticmaasho dhiirigelin, xoojinta wanaagsan iyo in la dhiso cida hogaamisa hogaaminta.
Mar alla markii aad adigu samaysato inaad tahay hoggaamiyaha baarkinka, Adhijirkaaga Cadaanka ah ee Swiss ma ka tegayo dhinacaaga oo wuu ku raacayaa meel kasta.
Eeyahaani waa super xiisaynaya inuu ka farxiyo iyo gabi ahaanba jeclahay inay noqdaan udub dhexaadka dareenka . Natiijo ahaan, waxay jecel yihiin in lagu daro qayb ka mid ah qoyska waxayna aad ugu fiican yihiin dareenka aadanaha.
Si kastaba ha noqotee, tani waxay ka dhigan tahay in haddii keligiis loo daayo muddo dheer eygan u nugul yahay kala-go'id walaac taasoo u horseedi karta dhaqan xumo.
Xayawaanadan ilaalada ah ayaa sidoo kale ah ciyi yaqaan dadka shisheeyaha ah iyadoo tanina ay ka dhigeyso inay u digtoonaadaan eeyaha ilaaliyaha ah kama taageeri doonaan afkooda iyagoo leh dabeecad adag, dabeecad dagaal leh noocyada kale ee Shepherd waxayna doorbidayaan halkii ay ka noqon lahaayeen ka dib dhawaaqa digniinta.
Gardaro la’aantan ayaa ka dhigan in Berger Blanc Suisse uu yahay ku habboon nolosha qoyska sida eydaasi yihiin deggan oo fiiro gaar ah u leh carruurta .
Dabeecaddooda hufan dartiis si kastaba ha noqotee, eeyahaani waxay ka digtoonaan karaan eeyaha kale iyo isdhexgal hore waa lagama maarmaan.
Kuma fiicna sameynta saaxiibo cusub oo ka baxsan xirmada qoyskooda waxayna doorbidaan kuwa noocooda ah ama xayawaanka ka yar iyaga.
Martida cusub waa in si tartiib tartiib ah loo soo bandhigaa si looga fogaado wax kasta oo gardarro ah eeygaaga.
La kulan Shiro iyo Teresa, The White Swiss Shepherds - Isha sawirka
The White Swiss Shepherd waxaa laga yaabaa inuu yahay eey qurux badan oo jilicsan laakiin waxay leeyihiin baahiyo daryeel oo lagama maarmaan ah oo u baahan in la tixgeliyo ka hor intaadan helin mid ka mid ah eeyadan inay kuugu yeeraan inaad leedahay.
Dharkooda laba jibbaaran ayaa ka caawiya inay diidaan oo ay ka tarjumaan qorraxda si ay ula tacaali karaan xaaladaha cimilada badankood, gaar ahaan qabowga, si kastaba ha noqotee, waa inaan looga tagin banaanka muddo dheer oo weyn sababo la xiriira kala-tagooda.
Waxay sidoo kale leeyihiin dhowr shuruudood oo daryeel ah markay tahay jimicsiga, qurxinta iyo quudinta.
Ey ciyaar badan oo leh heerar tamar sare leh
Socod dheer oo banaanka ah ma noqon doono jimicsi kugu filan si maskaxda caqliga leh ee White Shepherd loo kiciyo.
Eeyahaani waxay u baahan yihiin socod dheer ama socod xoog leh oo ay weheliso waqtiga ciyaarta, qalabka is-dhexgalka iyo leylisyada shaqada.
Sababtoo ah shaqadooda eyga wadista, noocani wuxuu jecel yahay inuu sameeyo isboorti iyo firfircooni wuxuuna jecel yahay waxqabad kasta oo soo bandhigaya caqabad wanaagsan. Digniinta, Berger Blanc Suisse ugu yaraan 90 daqiiqo oo firfircoon ayaa looga baahan yahay maalin kasta .
Qurxinta Adhijirka Cadaanka ah ee Swiss
In kasta oo ay leeyihiin labbiska dhumucda weyn, jaakadda White Swiss Shepherd ayaa si fudud u maareeya. Si kastaba ha noqotee, eeyahaani waxay daadiyaan sanadka oo dhan, gaar ahaan xilliga daadinta.
Cadayashada hal mar ama laba jeer usbuucii ayaa kugu filnaan doonta . Laakiin haddii eeygaagu si xawli ah u daadinayo, markaa cadayashada maalinlaha ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto si looga hortago timaha inay isku xoqmaan.
Koodhkooda cad way fududaan karaan wasakhda sidaas darteed maydhashada joogtada ahi waxay noqon kartaa baahi, si kastaba ha noqotee, iska hubi inaad isticmaasho shaambo ey jilicsan iyo iska ilaali qubayska taasoo ka xanaajin karta maqaarkooda.
Sidoo kale waa inaad hubisaa inaad cadayato cadaygaaga White Swiss Shepherds dhowr jeer asbuucii isla markaana aad musmaarrada iskaga xajisid bishiiba mar. Markaad cadayanayso eeygaaga hubi inaad sidoo kale hubiso oo aad nadiifiso dhagahooda.
Quudinta Adhijirkaaga Cad ee Swiss
Noocyada 'Shepherd' waxay u muuqdaan kuwo xasaasi ah marka ay timaado quudinta marka loo eego eeyaha kale iyo nidaamyadooda dheef-shiidka ayaa kaliya la tacaalaya cunto tayo wanaagsan leh.
Natiijo ahaan, White Swiss Shepherd waa in aan la quudin qashinka miiska isla markaana aad hesho cunto uu eeygaagu jecel yahay waxaa muhiim ah in la ilaaliyo isbeddelladan joogtada ah iyo kuwa aan caadiga ahayn ee cuntada waxay u horseedi kartaa calool xanuun.
Eeyahaani waxay u baahan doonaan 3 ilaa 5 koob oo ah eeyo tayo sare leh oo tayo sare leh maalin kasta iyadoo tiradaani ku faafto inta u dhexeysa laba jeer oo cunto ah si loo joogteeyo heerarka tamarta.
The White Swiss Shepherd wuxuu leeyahay celcelis cimriga nolosha 12 illaa 13 sano , si kastaba ha noqotee, eeyadani waxay u nugul yihiin qaar ka mid ah arrimaha caafimaadka ee halista ah.
Xanuunada caamka ah ee leh noocyadan waxaa ka mid ah burooyin sababi kara caloosha inay murgacato ama qalloocato, Degenerative Spinal Stenosis oo sababi karta lug xanuun oo u horseedi kara dhibaato socodka, Xadgudubka Retinal Atinal ee u horseedi kara indho la'aan, Myelopathy oo xumaada taas oo ah cudur laf dhabarta aan daawo lahayn iyo Cudurka Von Willebrand kaas oo joojiya xinjirowga dhiigga.
Sida Adhijirka Jarmalka, noocani sidoo kale waa u nugul yahay Hip iyo xusulka Dysplasia taas oo ay keento cillad xagga godka sinta ah waxayna u horseedi kartaa cillad iyo hoos udhaca dhaqdhaqaaqa sababo la xiriira isqabqabsiga joogtada ah ee u dhexeeya kubbadda iyo godka wadajirka ah ee sinta.
Nooca Berger Blanc Suisse ayaa sidoo kale u nugul xasaasiyadaha iyo noocyo kala duwan oo ganaca iyo calool xanuun ah, waa sababta ay muhiim u tahay in la hubiyo in eeygan uu helo cunno tayo wanaagsan leh.
Xirmooyinka quruxda badan ee quruxda badan ee cad ee loo yaqaan 'White Swiss Shepherd puppy' ayaa si aad ah loo raadiyaa ka dib oo aad qaali u ah. Celcelis ahaan waad awoodi kartaa filo inaad bixiso $ 1,300 inaad iibsato Berger Blanc Suisse oo aad iska leedahay.
Berger Blanc Suisse Kalkaaliyeyaasha
Haddii aad diyaar u tahay inaad iibsato Ey adhijir ah oo 'Swiss Swiss Shepherd' ah waa inaad ka warqabtaa xaqiiqda ah in in yar oo ka mid ah eeydan yar yar ee la jecel yahay ay diiwaangashan yihiin sannad kasta waana macquul inaad gasho liiska sugitaanka mid hel.
Ka hor intaadan helin Berger Blanc Suisse eey adigu iska hubso inaad la kulanto abuure oo aad booqato aasaaskooda.
Kuwani noocyada dhifka ah ee aadka loo raadinayo ayaa ah u nugul dhiig-miirashada cunug yar oo sidaas awgeed la kulanka breed a iyo sameynta jeegaga lagama maarmaanka u ah muhiimad weyn.
Sidoo kale waa muhiim in hubi taariikhda caafimaadka eeyaha waalidka abuurnahu waa inuu awoodaa inuu bixiyo dhamaan wixii caafimaad ee lagama maarmaanka u ah iyo nadiifinta xoolaha.
Hubinta shahaadooyinkan ayaa ah sida ugu wanaagsan ee lagu hubiyo inaad hesho cunug yar oo 'White Swiss Shepherd' ah oo caafimaad qaba oo faraxsan kaas oo u badnaan doona inuu ku dhaco xanuunno sida hip dysplasia nolosha dambe.
Waa kuwan qaar ka mid ah breed Shepherd White Swiss Shepherd oo laga yaabo inay leeyihiin eey gurigaaga ah:
Sun Star Swiss Adhijirrada
White Swiss Shepherd si loo korsado
In kasta oo had iyo jeer ay kafiican tahay badbaadinta ama korsashada eey, nasiib daro, waa dhif iyo naadir in laga helo Hoyga Cad ee Switzerland.
Helitaanka mid ka mid ah eeyadan loo heli karo korsashada ma sahlanaan doonto, laakiin waa kuwan dhowr meelood oo aad ka billaabi karto raadintaada:
Samatabbixinta & Dib-u-hagaajinta Shepherd Swiss
Badbaadinta Caddaan Samatabbixinta Adhijirka Jarmalka
Waxaa jira iskudhafyo badan oo Jarmal ah oo halkaas isku dhex jira, laakiin ahaanshaha eey saafi ah, sidaad ogtahay, Adhijirka Switzerland ayaan ka mid ahayn.
Haddii aad wadnahaagu saaran tahay Shepherd White Swiss laakiin aadan rabin inaad bixiso qiimaha culus ama aadan heli karin mid diyaar u ah korsashada, waxaa jira noocyo ama iskutallaab la mid ah oo aad ka fiirsan karto.
Noocyadan la midka ah waxaa ka mid ah:
Adhijirka Cad ee Mareykanka
Isku darka Shepherd Chow
White Shepherds waa mid ka mid ah noocyada dhifka ah ee isku dar quruxda iyo maskaxda . Eeyahaani waxay leeyihiin muuqaalka Adhijirka Jarmalka oo aan lahayn gardarro, iyaga oo ka dhigaya kuwo ku weyn carruurta.
In kasta oo ay noqon karaan eyga qoyska ugu dambeeya, Berger Blanc Suisse weli wuxuu u baahan yahay jacayl badan iyo fiiro gaar ah waxayna u nugul yihiin arrimo caafimaad oo yar. Intaa waxaa dheer, jaakad cad waxay u baahan doontaa in si wanaagsan loo ilaaliyo.
Miyaad u maleyneysaa inaad kaligaa xamili karto Adhijirka Cadaanka ah ee Switzerland? Noo sheeg waxa aad ka aaminsan tahay qashin-qubka adoo ka tagaya faallo hoose.
Macluumaadka Taranka Eeyaha ee Komondor & FAQs
waa maxay puppy maltipoo
dhammaan adhijirka jarmalka naag madow
magacyada Irish lab ee eeyaha
midab cas oo indho buluug ah leh